Emmerson Mnangagwa Archives - ARY NEWS
Fired state doctors reject offer to return to work
Zimbabwe state doctors who were fired for going on strike have rejected a government offer to return to work, their union said on Friday
Robert Mugabe, who led Zimbabwe with an iron fist from 1980 to 2017, has died aged 95
Zimbabwe’s Human Rights Commission (ZHRC) accused security forces of systematic torture.
Opposition spox says Zimbabwe army action unjustified as three killed in protests
HARARE: Zimbabwe police said three people were killed in Harare on Wednesday as soldiers dispersed stone-throwing opposition supporters who accused the ruling party of trying to rig Monday’s presidential election. The deployment of soldiers and their beating of unarmed protesters set back President Emmerson Mnangagwa’s efforts to shed Zimbabwe’s pariah status after decades of repression under Robert Mugabe, who was ousted in a coup in November. Even before the violence, European Union observers questioned the conduct of…
HARARE: Zimbabweans began voting on Monday in the first election since the removal of former president Robert Mugabe, a watershed vote they hope will rid the country of its global pariah status and spark a recovery in its failed economy. The election will see 75-year-old President Emmerson Mnangagwa, a long-time Mugabe ally, face 40-year-old Nelson Chamisa, a lawyer and pastor who is vying to become Zimbabwe’s youngest head of state. Voting started at 7am (0500 GMT) and will end at 7pm Polls give former intelligence…
Chinese President Xi Jinping told President Emmerson Mnangagwa of Zimbabwe that they should work towards a new chapter in ties, during the African leader’s first state visit to China since he seized power last year.
HARARE: Zimbabwe’s former army commander who led a military takeover that helped end Robert Mugabe's 37-year rule was on Thursday sworn in as one of the country's two vice presidents. General Constantino Chiwenga, 61, took the oath of office in Harare, pledging to be "faithful" to Zimbabwe and to "obey, uphold and defend the constitution". "I will discharge my duties with all my strength and to the best of my knowledge and ability," said Chiwenga, dressed in a black suit at a ceremony held on the lawns of the…